समस्याको चाँङ नदेख्ने तर गाउँ गाउँमा दल प्रवेश गराउने ? – Nepalpostkhabar
नेपालपाष्ट खबर । ४ आश्विन २०७८, सोमबार ०६:५७ मा प्रकाशित
भनिन्छ राजनीति सेवा हो , न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राजनीति सही हुनुपर्छ । जनताको जीवन स्तरका साथै चेतना अभिवृद्धी गरी युग बदल्ने अभियान राजनीतिक चेतनासँग गाँरिएको हुन्छ ।
हामीले दैनिक जनतालाइ दिने सूचना र जानकारीहरु सही विचारबाट निर्देशित मात्र होइन , सही र गतल छुट्याएर भावी मार्गहरु पनि गतिला बनाउनेमा केन्द्रीत हुनुपर्छ । विडम्वना ! हाम्रो राजनीति सधैँ आफ्ना कुरा बेसरी जनताको नाममा भएभएरका कुरा लाद्नेमा मात्र केन्द्रीत भयो तर खास जनताले अधिकार र न्याय कहिले पनि महसुस गर्न पाएका छैनन ।
जाजरकोटका गाउँ , गाउँमा अहिले दल प्रवेश गराउने र त्याग्ने क्रम जारी छ । यो वषौँ देखि हुँदै आएको छ । दल त्याग्नेलाइ विचारबाट प्रशिक्षित भएर नभइ खानेपानी , सडक ,पुल र आफन्तलाइ जागिर लगाइदिने विषयलाइ मुख्य केन्द्र बनाइ प्रवेशको लिष्ट तयार गरी एक मुठी अविर दलेर प्रवेश गराउने काम हुँदै आएको छ ।
जव ति प्रवेश गर्नेको स्वार्थ पुरा हुँदैन उनीहरु फेरी अर्को दलको कार्यक्रममा सहभागी भएर त्यहाँ प्रवेश गदै आएका छन् । हामीले निर्माण गरेको विकास संरचना , अनि जनताको चाहेको भरपर्दो काम नभएकाले नै निरन्तर प्रवेश गर्ने र स्वार्थका एजेण्डा स्थापित गरेर सधैँ आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्ने नेतृत्व हुन्जेल सम्मा दलमा प्रवेशका कार्यक्रमहरु चलिरहने छन् । जनताका लागि गरिने राजनीतिले जनताका आधारभुत आवश्यकता समेत पुरा गरेको हुनुपर्छ ।
जनतालाइ स्वार्थको पगरीमा बाधेर भएभरका झुट्टा मनभरीका स्वार्थहरु पुरा गर्न लिडरहरु सफलै हुने देखिन्छ । जिल्लामा अहिले चार वर्ष देखि ठेक्का लागेको विद्युतको काम लथालिङग छ । सो समस्याका विषयमा कोही बोल्दैन , सदरमुकाममा बस्ने र पालिकाकामा बस्नेलाइ सरकारी सुविधाले पुगेकै छ । राज्यको पुरा ध्यान पुगेको ठाउँमा स्वार्थले भरिएका मुठीभरका मान्छेको रजाइ जारी छ तर उनीहरु गाउँका समस्याका विषयमा कुरा उठाउनु त टाढाको कुरा हो , कत्ताबाट फाइदा हुन्छ त्यो मात्र एजेण्डा उठाएर असत्यलाइ सत्य बनाउन खोज्दैछन् ।
जिल्लामा सडक निर्माणको लागि लिइएका ठेक्का , पुल पुलेशा तथा अस्पतालमा भएका वेतिथिका बारेमा को बोल्ने ? किनकी यहाँ सबै दलका खास कार्यक्रता छन् , त्यसमा पनि पुरा प्रशिक्षित मात्र रहेका छन् । आफ्ना समर्थकले गरेका गलत काम उनीहरु कहिले पनि देख्दैनन् । अर्काले गरेका कुरा पनि नभएको गल्ती कोट्याएर जनतालाइ छलछाम गर्न उद्धत देखिन्छन् । हामीले निर्माण गरेको न्यायपूर्ण समाज र कल्यानकारी राज्यको मर्म यही हो त ? यसता कामले जनताको जीवन स्तर अनि पीरमर्काहरु सही तरिकाले अगाडी बढ्लान ?
जसले जुन पेशा गरेको छ , उसले सो पेशा इमान्दारिता पूर्वक किन पालना गदैन , अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर उसले हजार थरी झुटको पुलिन्दा फाँकेर समाज निर्माणको असलबाटोलाइ गलत मार्ग तीर किन धकेल्दै छ ।
पश्चिमको खारा खोलामा पुल निर्माण नहुँदा वर्षेनी यातायातका साधनहरु डुवेर जोखिम मोल्दै खोला पार गरेका कथा देखि पूर्वी जाजरकोटको खारामै आफूले सडक बनाएको भन्दै दिनदहाडै प्रतिव्यक्ति रु ५०० असुल्ने गुण्डा संस्कृतीको विकास तर्फ किन हामी लागिरहेका छौँ ।
राजनीतिले समाज सही मार्गले लिने र संमृद्धिको कल्पना गरेको हुन्छ । राजनीतिक दलका घोषण पत्र र विधानमा समेत संमृद्धिको कथाहरु मजाले कोरिएका छन् । तर दलहरु किन आफैँले लेखेको कुरालाइ अक्षर अक्षर उल्टाउदै भ्रमको खेती गरी फोहरी खेल खेल्न उद्धत छन् । दिगो विकासको मोडललाइ अंगिकार गर्न केले रोकेको छ ।
कत्तिपय मान्छेहरु समस्या देखेर पनि आखा चिम्म गरी किन हिड्छन् ।शासक पनि केही कुरामा न्याय गर्न सक्ने हुन्छ तर हाम्रो राजनीतिक दल र तीनका केही थान व्यक्तिहरु अत्यचारको सिमा नाघने गरी किन आफ्नो प्रवृती विष जस्तै गरी फैलाइरहेका छन् ।
भेरीमालिका दैनिकले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि भन्दै लगात्तार हप्ता दिन समाचार पहिलो पेजमा छापेको देखिन्छ । त्यो समाचार स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि थियो । तर केही मान्छेहरु समाचारको तथ्य भन्दा बाहिर गएर बार्गेनिकको नारा दिएर मुल एजेण्डा ओझेलमा पार्न समाजिक सञ्जालको सहारा लिएको देखिन्छ ।
जसले जाजरकोटको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कमै मात्र सेवा लिन्छ । उ सुविधा सम्पन्न ठाउँमा घर भएको व्यक्ति पनि हो । कत्तिपय दलका यूवा नेताहरु समेत सकी नसकी कमेन्ट गरीरहेका हुन्छन् , जसले अस्पताल सुधारका लागि कहिले केही देखेका छैनन । मात्र आफ्नो खालको भाग पुग्यो वा पुगेन भन्नेमा मात्र उनीहरु दैडिरहेका देखिन्छन् । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सरकारी हो , राज्यले सबै खालका सेवा दिनुपर्छ र हामी नागरिकले पाउनु पर्छ । तर केही एकाध मान्छेहरु स्वास्थ्य सेवा कार्यालयको प्रवक्ता बनेर आयतित कर्मचारीलाइ बुरुक्क बनाउने तर्फ ध्यान नदिएकै राम्रो ।
किनकी हामी जाजरकोट हो , हामीलाइ जाजरकोटमै सबै सेवा चाहिन्छ । राजनीतिक अखडा बनाएर दलिया स्वार्थ पुरा गर्न कसैलाइ छुट छैन । राजनीति गर्न त राजनीतिक दलले कार्यालय खोलेकै छन् । सामाजिक सञ्जालमा फुत्त लेख्दैमा केही हुने वाला छैन । साच्चिकै न्यायका लागि लड्ने हो भने कसले कति योगदान गरेको छ र गर्न बाँकी छ खुल्ला बहस गर्न जरुरी छ ।